inkolo: uMartin Vrijland
Kutheni u-Ole Dammegard lixabisa kakhulu kwiimidiya ezongezelelweyo
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	12 Novemba 2018	• 6 Comments
U-Ole Dammegard uqhutyelwa kwezinye iindaba. Udliwano-ndlebe lwakhe ngoko ke ukufudumala kwentliziyo kunye nokukhutshulwa kweentlobo zeengqungquthela zobuxoki akukho nto emfutshane. Ngamanye amaxesha uyazixela kwangaphambili. Ngendlebe nodliwano-ndlebe no-Irma Schiffers ufika njengomntu onobubele nonothando. Unokuvumelana kunye [...]
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.411.336